​१२ वर्ष जेठी मलाइकासँग विवाह र अरु भन्दा के फरक भन्ने प्रश्नमा अर्जुनले दिए रोचक जवाफ - टि. एल. एन पोस्ट
Home अन्तर्राष्ट्रिय ​१२ वर्ष जेठी मलाइकासँग विवाह र अरु भन्दा के फरक भन्ने प्रश्नमा...
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अर्जुन कपूर आफ्नो आगामी फिल्म भूत पुलिसको म्याकलोड गञ्जमा शुटिङ्ग गर्दै छन् । अभिनेत्री एवं प्रमिका मलाइका अरोड़ा पनि अर्जुनसँगै तिहार मनाउन त्यहाँ पुगेकी थिइन । मलाइका अहिले हिमाञ्चालको पहाडमा उनको मिनी छुट्टीको मजा लिईरहेकी छिन् ।
उनका त्यहाँबाट फोटो र भिडियोहरू आइरहेका छन् । हालै मलाइकाले आफ्नो भर्खरको फोटो साझा गरेकी छिन, जसमा उनले सेतो लुगा लगाएको देखिन्छ । फोटो साझा गर्दै मलाइकाले लेखिन्, ‘रब, हट कप्पा, पिक तेर्दा है, तर राम्रो ।’ मलाइकाले करीनालाई यस फोटोमा ट्याग गरेकी छिन् । जानकारी अनुसार करीनाले मलाइकाको फोटो क्लिक गरेकी हुन् ।मलाइका र अर्जुन धेरै समयदेखि सम्बन्धमा छन् । केही दिन अघि फ्यानहरूसँग कुराकानीको क्रममा अर्जुनलाई मलाइकासँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरिएको थियो । यसको जवाफमा अर्जुनले भनेका थिए, ‘जब म विवाह गर्छु, म सबैलाई भन्नेछु । अहिले विवाहको लागि कुनै योजना छैन र यदि मैले अहिले नै विवाह गर्ने विचार गरें भने पनि त्यस्तो समयमा सम्भव छैन । हामी दुबैले विवाहको बारेमा सोचेका छैनौं । तर जस्तो म सधैं भन्छु जब म विवाह गर्छु, म भन्नेछु । हामी केहि पनि लुकाउँदैनौं, तर सबैलाई बताउँछौं र विवाह गर्नेछौं ।’
यस बाहेक, अर्जुनलाई फ्यानले सोधेका थिए कि मलाइका अरु भन्दा कसरी फरक छ । यसमा अभिनेताले जवाफ दिदैँ भनेका थिए, ‘जब तपाईं कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यो प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ किनकि केवल एक चीजले तिनीहरूलाई अरूबाट अलग गर्दैन । बरु, यसले धेरै चीज गर्दछ । मलाई लाग्छ मलाइकाले मलाई बुझ्छिन् र उनी मसँग अत्यन्तै धैर्यवान छिन् । म एक व्यक्ति हुँ जोसँग बस्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ । म कुनै पनि हिसाबले आराम गर्न सक्दिन । यस्तो अवस्थामा, मलाइकाको धैर्यता पनि मेरो लागि ठूलो हो ।’
Previous articleश्वेताले विवाह गरेपछि बिवाह गर्ने मुडमा रेखा थापा , को होलान उनको हुनेवाला ?
Next articleटर्कीमा ७ रेक्टरस्केलको शक्तिशाली भूकम्प, चार जनाको मृत्यु
श्रृंखलाले हस्तान्तरण गरिन् मिस वर्ल्डद्वारा महामारीविरुद्ध नेपाललाई सहायता प्रदान रकम